Andro Debian 2021: Navoaka tamin'ny andron'ny Debian i Debian 11 Bullseye? | Avy amin'ny Linux
Andro Debian 2021: Navoaka tamin'ny andron'ny Debian i Debian 11 Bullseye?
Linux Post Install | 15/08/2021 00:11 | Nohavaozina amin'ny 15/08/2021 00:34 | Fitsinjarana, About us
Omaly, 14 Aogositra 2021, natao ho an'ny olona tia ny Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux manerantany, andro iray tena manokana sy nandrasana hatry ny ela. Iray izay isan-taona dia fantatra amin'ny hoe Andro Debian na ny "Debian GNU / Linux Day".
Ambonin'ny zavatra rehetra, satria amin'ity Andro Debian 2021 maro no niandry ny fanambarana ny famoahana farany ny kinova miorina voalohany an'ny "Debian 11 Bullseye". Ary eny, omaly saika tamin'ny faran'ny andro dia navoaka ny kinova andrasana ary ny ISOs dia misy amin'ny fizarana mahazatra an'ny Tetikasa Debian. Ka: efa ananantsika "Debian 11 Bullseye" manandrana, mampiasa ary mankafy!
Debian 11 Bullseye: Fijery kely amin'ny fametrahana Debian vaovao
Ho fanampin'izany, hizara ny sasany amin'ireo vaovao farany mifandraika amin'izany izahay andro fankalazana y famoahana ny kinova vaovao.
Fa alohan'ny hidirany amin'ny vaovao toy izany mifandraika amin'ny Andro Debian 2021 nanomboka tamin'ny 14 / 08 / 2021, toy ny mahazatra dia hiala eo no ho eo ny rohy a Lahatsoratra mifandraika teo aloha amin'ny "Debian 11 Bullseye" izay efa niresahanay ny mety ho izy daty famotsorana farany. Mba hahafahan'izy ireo mamaky azy io amin'ny faran'ny famakiana ity boky ity raha ilaina izany.
"Araka ny fampahalalana ofisialy amin'ny Wiki de Fikambanana Debian, ity taona ity dia ny taona "Debian 11 Bullseye", satria, ireo no dingana lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana sy famoahana ity kinova ity:
12-01-2021: Tetezamita sy hatsiaka voalohany.
12-02-2021: Fangatsiahana malefaka.
12-03-2021: Fangatsiahana mafy.
17-07-2021: Fangatsiahana tanteraka.
14-08-2021: Daty famoahana farany mety."
1 Andro Debian 2021: Inona no Vaovao ho an'i Debian GNU / Andro Linux 2021
1.1 Efa navotsotra tamin'ny andron'ny Debian 11 i Debian 2021 Bullseye?
1.2 Fampahalalana momba ny fankalazana ny andron'ny Debian 2021
1.3 Vaovao farany momba ny famotsorana an'i Debian 11 Bullseye
1.4 Vaovao, vaovao ary fanavaozana ofisialy momba an'i Debian GNU / Linux
Andro Debian 2021: Inona no Vaovao ho an'i Debian GNU / Andro Linux 2021
Efa navotsotra tamin'ny andron'ny Debian 11 i Debian 2021 Bullseye?
Eny, omaly 14/08 saika tamin'ny faran'ny andro dia navotsotra izy. Araka ny voalaza tao amin'ireo fanontana farany misy omaly, amin'ny tranokalan'i Vaovao-Micro avy amin'ny Tetikasa Debian ary satria azo hamarinina amin'ny Misy ISOs Amin'ny manaraka rohy.
Fampahalalana momba ny fankalazana ny andron'ny Debian 2021
El Andro Debian dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny 14 / 08 / 2021, fa raha ny tena izy isan-taona dia ankalazaina amin'ny daty maromaro eo akaiky eo amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao izy io, araka ny hitanao amin'ny manaraka rohy.
El Andro Debian dia tena isaky ny 16 Aogositra isan-taona, ny andro Tetikasa Debian. Satria ny daty dia a 16 / 08 / 1993, araka ny voalaza eto ambany rohy.
Ny kinova vaovao vaovao rehetra an'ny "Debian 11 Bullseye" hivoaka izy io raha tsy misy lesoka hita intsony. Toro izay tratra omaly hariva, araka ny voarakitra an'ity manaraka ity rohy.
Vaovao farany momba ny famotsorana an'i Debian 11 Bullseye
23:40 – 14/08/2021: Navoaka i Debian 11 Bullseye: Mikaroha vaovao
23:31 – 14/08/2021: Amin'ny tranga Debian 11 Bullseye, ny security suite dia nomena anarana hoe bullseye-security, noho izany ny mpampiasa dia mila manamboatra ny lisitry ny lisitry ny loharanom-pahalalana APT mifanaraka amin'izany rehefa manavao. Mikaroha vaovao
23:14 – 14/08/2021: Raha Debian 9 (Stretch) na taloha ny rafitrao dia araho ny torolalana ao amin'ny Debian 10 famoahana naoty hanavao ny Debian 10 (Buster) aloha ary avy eo azonao atao ny manatsara ny Debian 11 Bullseye. Mikaroha vaovao
23:08 – 14/08/2021: Debian 11 Bullseye dia mandefa any amin'ny toeram-pivarotana akaikinao! Raha tsy afaka miandry intsony ianao, ny sary CD dia misy izao manaraka izao rohy. Mikaroha vaovao
Vaovao, vaovao ary fanavaozana ofisialy momba an'i Debian GNU / Linux
Ho fanavaozana bebe kokoa amin'ny Tetikasa Debian ireto rohy manaraka ireto dia azo zahana matetika:
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa DEBIAN
Fanamarihana famoahana Debian 11 (Bullseye), PC 64-bit
Vaovao amin'ny Espaniola
Bits ofisialy Bits avy any DEBIAN
Serivisy vaovao mikraoba: Micronews
Lisitra fanambarana an'i Debian
Lisitry ny fanambarana momba ny fiarovana Debian
Lisitry ny vaovao Debian
Raha fintinina, ity Andro Debian 2021 ny kinova vaovao nandrasana hatry ny ela Tetikasa Debianantsoina hoe "Debian 11 Bullseye" Ary mijanona ho an'ireo mpampiasa mafana fo sy antoko liana fotsiny izy io hampidina azy ity mba hitsapana azy, hampiasa azy io ary hankafizanao na haneho hevitra momba azy.
Manantena izahay fa ity famoahana ity dia tena ilaina amin'ny ankapobeny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary mandray anjara betsaka amin'ny fanatsarana, fitomboana ary fanaparitahana ny tontolon'ny rafi-tontolo iainana misy «GNU/Linux». Ary aza atsahatra ny fizarana izany amin'ny hafa, amin'ny tranokala tianao, fantsona, vondrona na vondron'olona misy tambajotra sosialy na rafitry ny fandefasan-kafatra. Farany, tsidiho ny pejin-tranonay ao amin'ny «Avy amin'ny Linux» hizaha vaovao bebe kokoa, ary hiditra amin'ny fantsona ofisialinay Telegram avy amin'ny FromLinux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Andro Debian 2021: Navoaka tamin'ny andron'ny Debian i Debian 11 Bullseye?
KDEApps2: Mitohy ny fizahana ny rindranasa Community Community
Fanafihana APT: Mety hisy fiatraikany amin'ny Linux ve ny fandrahonana maharitra?